တရားဝင် Trigger စာရင်း - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အချိန်အတော်ကြာပုန်း - ပထမအကြိမ်ပိုစတာ! ဒီ post ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာငါ post အသစ်များနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်၌တွေ့ခဲ့ရသော (horny ဖြစ်ခြင်း မှလွဲ၍) ဘုံအစပျိုးမှုများကိုစုစည်းရန်ဖြစ်သည်။ ငါအစပျိုးလိုက်တာကိုသိရင်ငါပြန်ဖြစ်သွားမယ့်အခြေအနေတွေကိုရှောင်နိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ် အနာဂတ်တွင်အစပျိုးခြင်းများကိုဖယ်ရှားရန်အစပျိုးခြင်းများကိုမှတ်သားနိုင်စေရန်တခါတရံကျွန်ုပ်ပြန်လည်အသက်ဝင်လာနိုင်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ mods တွေကဒီ post ကိုအဆုံးမှာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး side-bar မှာတင်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘုံအစပျိုးမှုသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်နေပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အားပြောပြပါ၊ ကျွန်ုပ်တည်းဖြတ်ပါလိမ့်မည်။
အားလုံးအစပျိုးဖော်ပြခဲ့တဲ့ကြသည်မဟုတ်, အခြို့အစပျိုးသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ရပါလိမ့်မယ်။ order အရေးမထားဘူး။ ခပ်သိမ်းသောကာလ-of အားလုံးအာရုံအပေါင်းတို့, အတှေးအပေါငျးတို့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်ဝိညာဏ်သူ့ဟာသူကို AT စိသတိထားပါဖို့သတိရပါ။
စိတ်ဖိစီးမှု / ကွောကျရှံ့ခွငျး
စိတ်ပျက် / ဒေါသ / ပျက်ကွက် / စိတ်ပျက်စရာ / ပယ်ချ
Reward System / ရမှတ်အသစ်တစ်ခု (“ ငါ ၁၃ ရက်လုံးလုံးကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုချခဲ့တယ်”)
အခြိနျဆှဲ / ပျင်းရိသော / မလုပျဘဲနခွေ
self-ဗဟိုပြု / မနာလို
အိပ်ရာမှ Going အိပ်စက်ခြင်း / အိပ်မပျော် / ငြီးငွေ့ / မရှိခြင်းလနှောင်းပိုင်း / ပူနွေးစောင်
အနိမျ့ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ် / Sadness
မူးယစ်ဆေးဝါး Smoking နှင့် / သို့မဟုတ်ပေါင်းပင်
အရက် / Hungover
တညဉ့်ထွက် / ကလပ်စိတ်ပျက်စရာပြီးနောက်တစ်ဦးတည်းနေအိမ်
နံနက် Wood က (မရှောင်လွှဲနိုင်သောဒါပေမဲ့ Control)
junk စားနပ်ရိက္ခာ / အမဲသား / စပ်တဲ့အစားအစာများ / ဂျင်း / ကြက်သွန်ဖြူ
လူကြိုက်များသောဆိုက်ကိုထည့်ပါ (သင့် subreddits ပေါ် မူတည်. ) မှောင်မိုက် / 9gag / Reddit ပြီးနောက်ဘုတ်အဖွဲ့ site ကို / Stumbleupon / ကစားတဲ့ဆိုဒ်များ / Imgur / Torrent Sites များ / Twitter ကိုကျပန်း / Facebook ကို (သင် / အပေါ်သို့ခုန်ကြောင့်မိန်းကလေး / အခွင့်အလမ်းထွက်လွဲချော်အပေါ်တစ်ဦးအရူးအမူးရှိ) / မိုရုရှားသတို့သမီး Ads
ဗီဒီယိုဂိမ်း / တစ်ဦးချင်းစီတစ်နာရီ 15 မိနစ်လပ်ချိန်မရှိဘဲအချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအဘို့သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိဖြစ်ခြင်းကစားခြင်း
Fecal သို့မဟုတ် Urine ကိုသင့်ရဲ့ ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်မှုကိုဖိအားပေးဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သွားစရာမလိုတော့ဘဲသွားပါ။
ပွတ်တိုက်မှု / ခံစားခဲ့ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွ / Snuggies / ခေါင်းအုံးခွင့်ပြုအဝတ်အထည်
ရိုးရှင်းစွာအတို့သ / လက်ဖက်ရည်
ဤတွင် Fetish ထည့်ပါ
ဤတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Fantasy ထည့်ပါ
ဤတွင် Celebrity ထည့်ပါ
အစောင့်အကြပ်စာမျက်နှာများ / Craiglist နှင့် / သို့မဟုတ် Kijiji ပြည်တန်ဆာတက်ရှာနေ
ဝမ်းနည်းစရာ (/ r / nofap- ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှု၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်မကြာခဏ“ anon sex / oral / bj နှင့်၎င်းကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော်ပြရန်ဖော်ပြခြင်း” ၏အမြဲတမ်းသတိပေးချက်ဖြစ်သည်။ )
r / nofap မှနှုတ်ထွက်လို
Low Energy သို့မဟုတ်မြင့်မားသောစွမ်းအင်လေထု (သင်နေသောပေါ်တွင်မူတည်သည်)
ခေါ်ဆောင်သွားစာပေ / Play / Ecchi Animation / အခြို့တီဗွီရှိုးများ။
ဟောငျးအမှတ်တရများ / Porn Flashbacks
ဖြည့်စွက် (testosterone Boosters / Pre-ယလေ့ကျင့်ခန်း)
ဆိုးရွားလှသောနေ့ရက်များ> Shitty နေ့ရက်များ> အမှန်ပင် Shitty နေ့ရက်များ> ITS RAINING SHIT HALLELUJAH! SHIN AMIN ရွာသွန်းရပြီ!
သင့်သူကပြောတယ်ဖုန်းနှင့်သင့်သူကပြောတယ် COMPUTER TRIGGER ကွ
ပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသော HALT - Hungry, Angry, Lonely, Tired
မှတ်ချက်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dopamine စနစ်အားလုံးစွဲဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Snowball အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဤအစပျိုးခြင်းအများစုသက်ဆိုင်သည်။ ငါအချို့အစပျိုးခြင်းဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်-ငါတို့ရှိသမျှသည်တမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။ အဲဒီမှာဘယ်မှာအရာအားလုံးတစ်နေ့ဖြစ်လိမ့်မည်, ငါဆိုလို, အရာအားလုံးတစ်ဦးမောင်းကြလိမ့်မည်။ စိတ်ပိုင်းထိုကဲ့သို့သောနေ့အဘို့ပြင်ဆင်ထားခြင်းရှိကြလော့။ ဤသည်နေ့ရက်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်သင့်ရဲ့စွဲလမ်း၏ Tipping အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တိုက်ရာတွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မည်သည့်အခါ (သင် hubris တွေ့ကြုံလျှင်) ပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
TL; DR-All အားလုံးသည်လက်ရှိပတ် ၀ န်းကျင် (Location, Location, Location!) ကိုမသိနားမလည်ခြင်းအထိပြိုကွဲသွားသည်။ အဝိဇ္ဇာသည်တဏှာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အစပျိုးမှုအားလုံးကိုသင်မတားဆီးနိုင်ပါ။ သငျသညျသူတို့ကိုငြင်းပယ်ရန်စနစ်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းသည်ပြfailureနာမဟုတ်ပါ၊
ကံကောင်းပါစေရဲဘော်။ ကိုကိုင်စွဲထားခြင်းနှင့်ကိုယ်သင် Free!